तस्करीको नयाँ शैली : सप्तकोसीमा बगाएर भारततर्फ नेपाली मदिरा ! | Ratopati
तस्करीको नयाँ शैली : सप्तकोसीमा बगाएर भारततर्फ नेपाली मदिरा !
इटहरी– भारतमा मदिराजन्य पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तस्करहरुले नेपाली बजारबाट मदिराको तस्करी गर्न थालेका छन् ।
भारतको विहारमा मदिरा बेचविखन र सेवनमा प्रतिबन्ध लागेपछि सीमावर्ती नेपाली भू–भागबाट भारतीयहरुले मदिराको तस्करी गर्न थालेका हुन् ।
नेपाली मदिरा भारतीय क्षेत्रमा तस्करी गर्न यहाँ नौलो उपाय प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
भाण्टावारी र कोशीब्यारेज क्षेत्रबाट मदिरा तस्करी गर्न पानीमा तैरिने गरी बोरामा हालेर कोशी नदीमा बगाउने र भारतस्थित गन्तव्यमा पुगेपछि उतार्ने गरिएको पाइएको हो । त्यसैगरी सप्तकोशीमा माछा पार्ने ढुंगासहितका मछुवाराहरुले आफ्नो डुंगाको तलपट्टी मिलाएर मदिरालाई बाधेर समेत भारत पु¥याउँने गरेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा २० देखि २५ रुपैयाँसम्म पर्ने मदिरा भारतको कर्जाईन, राघोपुर, सिमराहीलगायतका क्षेत्रमा लुकिछिपी भारु १२५ रुपैयाँसम्ममा बेचबिखन हुने गरेको छ ।
तस्करहरुले मदिरा तस्करीमा महिला तथा बालबालिकासमेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसरी फस्टाउँदै गएको मदिरा कारोबार नियन्त्रणमा प्रहरीले ठोस कदम चाल्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । सुरक्षाकर्मीसँगकै सेटिङमा कारोबार हुने गरेको कतिपयको आरोप छ ।
नेपाली मदिराको तस्करी दशगजाबाट हुने गरेपनि पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले कडाई गरेपछि सप्तकोशी नदीबाट बगाएर तस्करी गर्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् ।
सुनसरीको भाण्टावारी, लौकही, श्रीपुर, कप्तानगञ्ज लगायतका स्थानमा सीमा नजिकै मदिरापसल संञ्चालन गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ । यस क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी मदिरा पसल संञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लामै सबैभन्दा बढी मदिरा यही क्षेत्रमा खपत हुने गरेको मदिरा डिलरहरुको दाबी छ ।
होटल अगाडी राखिएको सबारीमा आगजनी
यसैबीच धरानमा होटल अगाडी पार्किङ गरेर राखिएको सबारी साधनमाथि आगजनी भएको छ ।
धरान–७ स्थित शान्तिपथमा रहेको बुढासुब्बा होटल अगाडी पार्किङ गरेर राखिएको को २३ प ४५६९ नं. को मोटरसाइकल र को १ ज ४००१ नं. को कारमा आगजनी भएको हो ।
झापा मेचिनगर नगरपालिका बस्ने राजु महर्जनको सुजुकीको कार र संखुवासभा चिचिला गाउपालिका बस्ने असिम राईको २२० सिसिको मोटरसाइकल आगजनीबाट नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ ।
राति करिब १ बजे भएको आगलागी धरान उपमहानगरपालिकाको दमकल तथा स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आगजनी कसले र किन गरयो भन्ने बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको बताइएको छ ।